Mmadụ Bịa ka anyị website
Ya mere, gịnị OuBo Chemical
Pụrụ iche & Oru oma
Anyị pụrụ iche na n'ichepụta Polyacrylamide maka 8 afọ na elu àgwà na asọmpi price. Anyị oru otu iso tupu ahịa, ahịa na mgbe-sales usoro iji na-akwado gị na nhọrọ, ngwaahịa ule na mgbe-sales ọrụ. Anyị na-ekwe nkwa: ọkachamara oru otu-enyere gị aka ime nhọrọ ziri ezi.
Anyị oru otu iso tupu ahịa, ahịa na mgbe-sales usoro iji na-akwado gị na nhọrọ, ngwaahịa ule na mgbe-sales ọrụ. Anyị na-ekwe nkwa: ọkachamara oru otu-enyere gị aka ime nhọrọ ziri ezi.
Cationic polyacrylamide maka nnukwu nnu bụ ...